Ayaa suuqa soo kabashada xogta waa cadaalad ah tartan rasmi ah oo ay jiraan in badan oo alaabta halkaas, si kastaba ha ahaatee inta badan waxaa la bixiyaa software ganacsi. Dhowr lahaanno edition oo lacag la'aan ah ama maxkamad, laakiin si joogto ah aad u hesho si aad u eegto kaliya files in la soo kabsaday karo ama waxaad awood inuu ka soo kabsado tiro yar oo ah xog, tusaale ahaan 64KB. Waxaa weli jira waxyaabaha dhowr dabranayn oo lacag la'aan ah halkaas in ay kaalmaynayso aad dib ugu hesho archive halkan iyo 10 software kabashada drive free adag ugu fiican:
Nidaamka qalliinka / th>
Soo Celinta http://www3.telus.net/mikebike/RESTORATION.html Windows 95/98 / Me / NT / 2000 / XP
CD-kabashada qalabeed http://www.oemailrecovery.com/cd_recovery.html Windows 98 / Me / NT 4.0 / 2000 / XP / XP SP2 / 2003 / Vista / 7/8
Recuva https://www.piriform.com/recuva Windows 8 / 8.1 / Vista / 7 / XP, iyo version Server
Recovery File Puran http://www.puransoftware.com/File-Recovery.html Windows XP / 2003 / Vista / Server 2008/7/8.
Falsan Data Recovery http://www.wisecleaner.com/wisedatarecoveryfree.html Windows XP, Vista, Win7 / 8 (labadaba 32-bit iyo 64-bit)
Glary Undelete http://www.glarysoft.com/glary-undelete/ Windows 98, ME, NT, 2000, XP, 2003 iyo Vista
Pandora Recovery http://www.pandorarecovery.com/download/ Windows Vista, Windows XP, Windows 2003 iyo Windows 2000
Recovery File SoftPerfect http://www.softperfect.com/products/filerecovery/ Windows XP, Windows 8
Soo Celinta waa freeware ah soo kabashada file boosaska badan ee ay Brian Kato. Utility kabashada Tani waa dhab ahaantii fudud iyo user saaxiibtinimo, iyo qalab awood u soo celinta files tirtiray oo hore oo ku yaalla recycle bin ama xitaa haddii ay si toos ah looga saari Windows Explorer.You aadan weli u baahan yihiin in aan la gashato, sidaas darteed waa Baxaan qashinka lahayn iyo mashquulin meel kasta oo aad nidaamka.
interface waa user-friendly.
Si aad u isticmaasho software this, uma baahnid inaad si loo soo dajiyo.
Waxaa gabi doono inuu ka soo kabsado dhammaan faylasha tirtiray.
The files soo kabsaday la Fasaadi laga yaabaa.
DRC waa xog drive qalab kabashada free DIY adag in dad leh aqoon computer ma awoodi doonaan in ay u isticmaalaan. Software Tani wuxuu qaadanayaa gui aad u sahlan oo bixiya ay user awood u leh inuu undelete files tirtiray in laga yaabo in ay ka hartay haamaha recycle ah. Intaas waxaa sii dheer, ADRC ku jira qaababka ay ugu ogolaadaan user in aad nuqulka archive ka disk ah oo lala yeesho qaybaha xun, Gadzhiyev disk ah oo fuliyaan gurmad ah image disk oo lagu daray ama soo kabasho image disk.
Iyadoo size file kaliya 44.4KB, waxa aanu u baahan tahay meel bannaan oo badan.
Waxaa fudud in la isticmaalo.
software Tani waxay taageertaa kaliya Windows 95, 2000 oo XP. Windows 7 iyo 8 users ma awoodi doonaan in la isticmaalo software ah.
3.CD Recovery qalabeed
CD-kabashada qalabeed kuu ogolaanaya in aad ka bogsato xogta ka CD jebiyey, HD-DVD, DVD, iyo Blu-Ray saxannada. Ma aha software run adag soo kabashada drive sida waa ay fiican tahay in loo yeedho soo kabashada CD. Codsigan uu baaritaanku cajaladaha iyo badbaadin macluumaadka ugu badan ee suurtogalka ah. In ku daray in ay taasi, waxaa kasoo muuqday mid aad u fudud oo dabiici ah interface ah user oo aan u baahan wax wacyi-farsamo. Intaas waxaa sii dheer, barnaamijka users u saamaxaaya in ay doorato noocyada files iyo meel kasta oo ay ku soo kabsadaan, iyo meel kasta si loo badbaadiyo macluumaadka.
Waxa ay taageertaa oo dhan nidaamka Windows.
Waxay badi loogu talagalay qalabka dhaawacan si ay u qabtaan soo kabashada xogta.
Ma waxay ahayd mid aad u deg deg ah, ka qaaday 6 saacadood si scan DVD kaliya.
Waxa aanu u taageeraan inuu ka soo kabsado xogta ka drive adag.
Recuva soo kaban karin files ka drives USB, drives adag, kaararka xusuusta, iyo xataa MP3 players, BD / DVD / CD saxanno, tirinta iPod ah. Files soo kabsaday ka mid emails, music, waraaqaha, sawiro, iyo videos. Iyo 64 edition aan la heli karin dadka isticmaala Windows 64 yara. Oo xataa aad leedahay baabuur 3TB adag, waxa kale oo aad isticmaali kartaa software si scan. Geedi socodka oo dhan aadan qaadan doontaa waqti dheer. Users dooran kartaa bilowga deg deg ah ama baaritaan qoto dheer inuu ka soo kabsado xogta.
Waxa loo isticmaalaa by dad badan oo horay iyo shuqullo wanaagsan.
Users isticmaali kartaa Deep Scan si scan qalabka oo dhan.
files Qaar ka mid ah la ma laga heli karaa.
Waxaa kaliya oo lacag la'aan ah qofka isticmaala.
Recovery File 5.Puran
Recovery File Puran waa heerka ugu mid ka mid ah, kuwaas oo dhan freeware adag soo kabashada drive. Waxa kaliya ma ahan kabanayso files ka drives adag, laakiin ka cajaladaha formatted, qoruhu lumay, telefoonada gacanta, DVD, kaadhka xusuusta, CD iyo USB drive. Waxaa jira saddex hab scan. A Quick Scan ku dhameysan doona habka iskaanka in dhowr ilbiriqsi. A Deep Scan waa byte ah iyadoo lagu eegayo byte iyo doono files faahfaahsan oo dheeraad ah. A Full Scan waxaa loo isticmaalaa in iskaan files in maahin soo kabsaday tusaale ahaan ka cajaladaha formatted.
Waxaa la shaqeeyaa dhammaan ka hawlgala nidaamka Windows.
version la qaadan karo waxaa laga heli karaa 32-yara oo lagu daray 64-yara versions labada Windows.
natiijooyinka Scanning waa in style geed dulmar goobidda fudud.
Waa lacag la'aan ah isticmaalka guriga kaliya.
Data Recovery Falsan waa software kabashada xogta drive kale oo lacag la'aan ah ku adag tahay inay soo kabsadaan ka files qalabka saari karo oo keliya. Oo markii iskaanka, waxaa isticmaala u saamaxaaya in ay raadiso file in la soo kabsaday. Feature ugu wanaagsan ee software waa in dadka isticmaala arki suurto gal ah soo kabashada oo qaybo ka mid ah oo wanaagsan, oo liita, mid aad u liita, laga badiyay. Nooca files in la soo kabsaday karaan falsan Data Recovery ka kooban image, dokumenti, video, file Tifaftirayaasha, audio, iyo email.
Waa sahlan oo fudud si ay u isticmaalaan.
Doonista feature raadinta awood u isticmaala si aad u hesho file laga badiyay
Waxaa jira doorasho Falanqeynta lahayn.
Ma qalabka oo dhan waxaa taageera.
Glary Undelete kaliya kabanayso nidaamka file ka mid yihiin NTFS, baruurta iyo EFS. Sida qaar ka mid ah software kale, waxa ay soo kaban karto, xogta laga qalabka saari karo. Users shaandhayn karo files noocyada file, magac iyo miisaan. Software Tani waxay inta badan u shaqeeya files Tifaftirayaasha iyo lo. Files lumay cayayaanka, shilalka iyo magdhow ka heli doonaa dib u la barnaamijkan.
Waa sahlan oo nadiif ah si ay u isticmaalaan.
Sifeey feature awood u isticmaala si fudud u heli faylasha lumay.
No edition qaadi karo laga heli karo.
Waxaa aysan taageeri Windows 7 iyo 8.
Pandora Recovery uu baaritaanku drive iyo abuuraa tusaha faylasha tirtiray ama hadda jira. Dabadeedna baar, waxaad xulan kara faylasha in la soo kabsaday iyo meesha uu files soo kabsaday. Xataa waxaad ka raadin karo in lagu fayl tirtiray by dhammaystiran ama qayb ahaan magaca, taariikhda abuurka, size, ama la soo dhaafay taariikhda helaan. Waxaa jira saddex farsamooyinka iskaanka: Browse, Search, iyo Deep.
Waxay leedahay ikhtiyaar Falanqeynta u isticmaala si aad u hubiso in faahfaahinta.
muuqaalada raadinta waxay leedahay ikhtiyaar qayb magaca raadinta.
Waxaa la kaliya rakibi karaa PC.
Users la keeneen in doonaa si loo soo dajiyo toolbar browser dib markii la rakibey barnaamijka.
Recovery 9.SoftPerfect File
Recovery File Softtech soo celiyo files tirtiray ka adag drive, kaarka SD, kaarka CF, qalabka USB, iyo qalabka kale ee lagu kaydiyo. Users si toos ah u isticmaali kartaa software aan loo xirxiro. Marka laga files Tifaftirayaasha ama lo, software this si fiican u shaqaynayo. Sida oo dhan software kale, dadka isticmaala kaliya u baahan tahay in la xusuusto magaca qayb galka iyo soo baadhaan in ay ka heli.
Waxa badbaadiyay waqtiga loo xirxiro.
kabsado lakiin ma aha 100% isku hallayn.
FreeUndelete waxaa ka shaqeeya oo keliya files tirtiray ka drive adag iyo xirmooyinka kaydinta qaar ka mid ah. Marka users nadiifiyo dhammaan faylasha on recycle bin, software tani waxay noqon doontaa doorashada ugu fiican. The files soo kabsaday si toos ah ku badbaadi doontaa folder cusub haddii khasaare ay daboolaya. Nidaamka file Qaar ka mid ah oo keliya u soo on sare nidaamyada hawlgalka Windows.
Waxay bixisaa taageero loogu rakibo iyo uninstallation labadaba.
interface waa nadiif ah oo fudud.
Waxay aanu lahayn hab Kulanka Xiisaha Leh.
Raadi My iPhone: Sida loo Setup, sahlo, Disable iyo Isticmaal
Hard Drive aan kabaha doonaa (Windows 7, Vista ama XP)
> Resource > Hard Drive > Top 10 Free Hard Drive Barnaamijyada Recovery